Red Hat CEO Jim Whitehurst Anosiya chigaro seMutungamiri weBMM Linux Vakapindwa muropa
Anenge makore matatu mushure mekubatanidzwa kweRed Hat muBMM, Jim Whitehurst nguva pfupi yadarika akazivisa kuti akaita sarudzo yekusiya chigaro semutungamiri weIBMNekudaro, iye acharamba achishanda semutevedzeri mukuru kuManaging Director Arvind Krishna uye nevamwe vese veboka revatungamiriri.
IBM yakazivisa kuti Jim Whitehurst, uyo akauya pasi pechibvumirano cheRed Hat, achasiya chigaro semutungamiri wekambani ingori mwedzi gumi nemana mushure mekutora chigaro. IBM haina kutsanangura zvikonzero zvekubva kwayo, asi yakaziva basa rayo rakakosha mukumhanyisa Red Hat 2018 oparesheni, inosvika madhora makumi matatu nemana emadhora, uye kuunza makambani maviri pamwechete mushure mekutengeserana kwapera.
"Jim ave achibatsira mukuumba zano reBMM, asi zvakare mukuona kuti IBM neRed Hat zvinoshanda pamwe chete uye kuti matekinoroji edu ehunyanzvi uye zvigadzirwa zvinopa kukosha kwakanyanya kune vatengi vedu," yakadaro kambani.
Jim akataura kuda kwake kuramba achitora chikamu mukusimudzira bhizinesi reBMM semupi wezano kuna Krishna, asi atove semupi wezano kune manejimendi eBM. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mushure mekuziviswa kwekuenda kwaJim Whitehurst, IBM migove yakaderera mumutengo ne4,6%:
"Mumakore angangoita matatu kubvira zvakaziviswa zvekutengwa, Jim ave akashanda mukutaura zano reBM, asiwo mukuumba zano reBM. Kuona kuti IBM neRed Hat zvinoshanda mushe pamwe chete uye kuti hunyanzvi hwedu, mapuratifomu uye zvigadzirwa zvitsva zvinopa kukosha kwakanyanya kune vatengi vedu, ”anonyora Krishna.
Kubva muna2008 kusvika muna2019, Whitehurst akashanda seMukuru (Mukuru Mukuru) neRed Hat uye mushure mekupedza kusangana kweRed Hat neBMM muna2019, akazova mutevedzeri wemutungamiri weBMM uye mukuru wedhipatimendi rakatamira Red Hat. MunaNdira 2020, Whitehurst akagadzwa nedare revatungamiriri semutungamiri weIBM. Pasi pehutungamiriri hwaWhitehurst, mari yaRed Hat yakawedzera zvakapetwa kasere uye mari yemusika yakawedzera kakapetwa kagumi.
IBM payakatenga Red Hat muna2018 nemadhora makumi matatu nemana emadhora, zvakamutsa shanduko dzekuchinja kumakambani ese, sekutanga, Ginni Rometty akasiya basa seBM CEO naArvind Krishna vakatora chinzvimbo y al nguva imwe chete, Jim Whitehurst, aimbove CEO weRed Hat, sakatamira kuIBM semutungamiri uye mushandi wenguva refu Paul Cormier akatora chinzvimbo.
Panguva imwecheteyo, kambani iyi yakazivisawo dzimwe shanduko, kusanganisira iyo yakatora nguva refu IBM Executive Bridget van Kralingen akazivisa kuti naiyewo, achange achisiya chigaro semutevedzeri wemutungamiri wenyika pamisika yepasi rose. Rob Thomas, aive mukuru mutevedzeri wemutungamiriri weIBM Cloud uye Data Platform, achatsiva Van Kraligen.
Chero nzira, kuenda uku kunosiya nzvimbo hombe muchikwata chehutungamiriri chaKrishna sezvavanoedza kushandura kambani iyi kuita bhizimusi rine hunyanzvi hwakawanda. Zviripachena, Whitehurst akakwanisa kubatsira kutyaira shanduko iyi neakawanda indasitiri ruzivo uye kuvimbika neakavhurika sosi nzanga kubvira paanga ari kuRed Hat.
Neshanduko idzi, ndine chivimbo chekuti IBM ichave iri pachinzvimbo chakasimba chekubatsira vatengi vedu uye bhizinesi redu kuti ribudirire. Ndiri kutarisira kuenderera mberi nebasa rakakomba ratinoitira bhizinesi uye nzanga pasi rese nechikwata chakakosha chehutungamiriri, ”anonyora Krishna.
Asi mumwe anoshamisika kuti sei ari kusiya basa rake mushure menguva diki yakadaro uye nezvaanofunga kuita zvinotevera. Kazhinji mushure mekunge kutapurirana kwehukuru uku kwapera, pane chibvumirano pane iro mvumo yevakuru vatungamiriri. Zvingave kuti nguva iyi yapera uye Whitehurst anoda kuenderera mberi, asi akaonekwa nevamwe semugari wenhaka kuna Krishna uye kuenda kwake kunouya sechishamiso kana zvichitariswa mune ino mamiriro.
Pakupedzisira Izvo zvinofanirwa kutaura kuti kusvika parizvino IBM haina kuzivisa kutsiva. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Red Hat CEO Jim Whitehurst anosiya chigaro semutungamiri weBMM